Home Wararka Qoor Qoor oo shalay isku dayay in u caqabad hordhigo shirkii Afesyooni!...
Qoor Qoor oo shalay isku dayay in u caqabad hordhigo shirkii Afesyooni! Maxaa dhacay?
Kulankii shalay ee wadatashiga Qaran oo looga hadlay arimo badan oo la xiriira doorashooyinka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday in doorashada ka dhacdo shan magaalo oo kali ah arimaha la xiriira amniga awgeed.
Qoor Qoor oo ay Farmaajo iyo Fahad gadaal ka hagayaan ayaa fakarkaas si toos ah uga soo horjeestay isaga oo sheegay in uu dhawaan la soo kulmay shacabka reer Gaalkacyo diyaarna u yihiin in doorasho ka dhacdo deegaankaas.
Kulan gaar ah oo ay yeesheen RW Rooble iyo Qoor Qoor ayaa sidoo kale dood ku dhex martay labada nin iyada oo ay muuqato in Qoor Qoor doonayo in uu carqalad Cusub galiyo shirka Wadatashiga Qaran.
Dhanka kala Qoor Qoor ayaa kala hadlay Lafta Gareen iyo Guudlaawe in ay codsadaan in Farmaajo loo ogolaado in shirka uu ka soo qaybgalo, ama ugu yaraan uu Farmaajo shirka soo xiro.